COP15 ၏ ပထမပိုင်းအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း၌ ဖွင့်လှစ် - Xinhua News Agency
Agriculture China မြန်မာ-ENG
တရုတ်နိုင်ငံ၊ အနောက်တောင်ဘက် ယူနန်ပြည်နယ်၊ ကူမင်းမြို့၌ ပြုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂဇီဝမျိုးစုံကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ (COP15) ၁၅ ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး၏ မီဒီယာစင်တာ ဝင်ပေါက်အား ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံအားတွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကူမင်း၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဇီဝမျိုးစုံကွဲပြားမှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းတွင်ပါဝင်သောနိုင်ငံများကွန်ဖရင့်၏ ၁၅ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ပထမပိုင်းအား တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ်၏မြို့တော် ကူမင်းတွင် ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။
၎င်းအစည်းအဝေးတွင် အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ ပြုလုပ်မည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ဂေဟစနစ်ထိန်းသိမ်းရေး အပါအဝင် ခေါင်းစဉ်အလိုက်ဆွေးနွေးပွဲများ ပါဝင်သော လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်း အွန်လိုင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးများတွင် ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း ၁,၈၀၀ ကျော် တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အတွင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းရေး ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအအဖွဲ့အစည်းများ က ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက် ၂၀ ကိုချမှတ်ခဲ့ကြောင်း ဇီ ဝမျိုးစုံကွဲပြားမှုဆိုင်ရာအတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့မှ တွဲဖက်ပြန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်သူ Liu Sijia က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ မည်သည့်ပန်းတိုင်မှ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးကြောင်း ၎င်းအရာရှိက မှတ်ချက်ပြုသည်။
လာမည့်နှစ်တွင်ကျင်းပရန်မျှော်လင့်ထားသည့် ယခုအစည်းအဝေး၏ ဒုတိယပိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားထားရှိသော “၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အလွန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများမူဘောင်” ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိမ့်မည်ဟု Liu ကပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်စတင်အသက်ဝင်ခဲ့သောဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းတွင်ပါ ဝင်သည့်ပထမဆုံးနိုင်ငံများအနက် တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ယင်းညီလာခံ၌ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၁၉၆ ခု ရှိပြီး ညီလာခံသည် ကွန်ဗင်းရှင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းများအတွက် အမြင့်ဆုံးယန္တရားလည်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
KUNMING, Oct. 10 (Xinhua) — The first part of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity (COP15) will kick off on Monday in Kunming, capital of southwest China’s Yunnan Province.
The second part of the meeting, which is expected to be held next year, will review and makeadecision on the “post-2020 global biodiversity framework” that the international society pins great hopes on, Liu added.
China was among the first countries to becomeaparty to the Convention on Biological Diversity that entered into force in 1993. So far, the Convention has 196 parties and the Conference of the Parties is the highest mechanism for discussing and making decisions on the Convention. Enditem